Global Voices teny Malagasy » Bilaogy Lahatsary : Fiatoan’ny Fiara Fitateram-bahoaka ao Baramati · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Oktobra 2017 5:52 GMT 1	 · Mpanoratra Andy Carvin Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, India, Mediam-bahoaka
Nahavita fanadihadiana fohy iresahana Tranonkala iray aho tamin'ity faran'ny herinandro ity nandritra ny fitsidihako laboratoara fampiasàna solosaina mandehandeha tany Baramati, India tamin'iny herinandro lasa iny. Ilay lahatsary, antsoina hoe Fiatoan'ny Fiara fitateram-bahoaka ao Baramati, dia eo amin'ny enina minitra sy tapany eo ny faharetany. Mandalina ny laboratoara fampiasàna solosaina mandehandeha, izay manasongadina solosaina roapolo eo noho eo napetraka tao anatina fiara fitateram-bahoaka. Asehoako amin'izany ihany koa ny fitsidihako efitrano fianarana tao amina fianarana ho an'ny ambaratonga ambany, ary fihaonana tamin'ny ankizy sasany tao an-tanàna izay tsy mandeha an-tsekoly — ary noho izany dia tsy manana fahafahana hiditra amin'ny teknolojia.
Nanao dika roa an'ity lahatsary ity aho, ny iray tsy misy dikanteny ary ny iray misy dikanteny.
Samy lava avokoa ireo dika roa amin'ilay sarimihetsika – mihoatra ny 45 mega. Noho izany mety afaka manajanona ny fitrohana ilay lahatsary mandritra ny fotoana fohy ianao mialohan'ny hijerena izany. Tsaratsara kokoa, sintony daholo izy rehetra aloha, amin'izay tsy mila mieritreritra mikasika ny fitohanany noho ny haratsin'ny koriana ianao. Nampiasàna ny lisansa Creative Commons tsy azo amidy/fanolorana/zaraina amin'izao endriny izao ilay sarimihetsika, izay midika fa afaka jerena, avoaka ary aparitaka noho ny antony ara-panabeazana sady tsy ara-barotra mihitsy aza izany.
Ho anareo liana amin'ny fomba nanaovako ilay lahatsary, ireto misy sombina teknika malakilaky nampiasaina. Tamin'ny alalan'ny fakantsary niomerika Canon A60 no nakako ilay lahatsary, nalaina nandritra ny 15 minitra teo ho eo, teny an-toerana tany Baramti, Indiaa. Nakariko avy tamin'ny solosaina findaiko Mac G4 ilay lahatsary ary nokirakiraiko tamin'ny alalan'ny Final Cut Pro. Nahazoana alalana avy tamin'ny ProductionTrax.com ny mozika; mitentina 30 Dolara Amerikana eo ireo fahazoandalana ho an'ny hira efatra. Nampiasa ny fitaovana fanaovana feo lafika an'ny Final Cut Pro aho ho an'ny feo lafikaa (fitantarana), notenenina tamin'ny alalan'ny mikrao LogiTech USB. Nampiasana Final Cut Pro ihany koa ny fandikanteny. Naharitra teo amin'ny ora valo teo ny dingam-pamokarana manontolo, nandritra ireo andro maromaro nitambatra, hatramin'ny fampakarana ilay lahatsary ka hatramin'ny fanondranana ilay lahatsary ho rakitra Quicktime.
Na izany na tsy izany, mba jereo ilay izy rehefa afaka manao izany ianareo ary mba lazao ahy ny eritreritrao mikasika izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/29/109418/
 jereo ilay izy : https://www.youtube.com/watch?v=HTuievoYaLo